Tijaabada wax soo saarka - Beijing Prip Pip Pipe Technology Co., Ltd.
IMTIXAANKA SOO SAARKA
Ku saabsan wax soo saarka.
Isku-xidhka Biibiileyaasha Beijing Prip inta badan waxa ku jira ka dib taxanaha isku xidhka following
GRI-PG Sixixi ahaaneed ayaa loo xakameeyay siddo labalaab isku xidhaya. GRIP-GF isku xirka tuubada cadeynta dabka. GRIP-M Isku xidhka muruqmaalka badan - isku xidhka iyo iskuxiraha hal. GRIP-R Dayactirka tuuboyinka - nooca isku laalaada. GRIP-D Isku-xidhka tuubada qufulka laba-xidhka --- Dayactirka tuuboyinka oo leh 2 quful nidaam quwad isku xidha. GRIP-GT Isku xidhka biibiile biraha ah. GRIP-GTG Birta iyo isku xirka biibiile aan bir ahayn. GRIP-RT tuuboyinka isku xidha dhinac ka baxa. GRIP-Z Waxay xoojisay isku xirnaanta xasiloonida axially iyo wixii la mid ah. Taxanahan isku xidhka ahi asal ahaan wuxuu daboolayaa isku xidhka dhuumaha iyo baahida dayactirka macaamiisha.
Isku-xidhka Biibiile ee Beijing wuxuu ku guulaystay imtixaan ku filan, waxaa ka mid ah tijaabinta daalka gariirka, tijaabada garaaca wadnaha, tijaabada saamaynta, tijaabada cadaadiska dilaaca, tijaabada soo-bixida, baaritaanka faaruqinta, tijaabada dabka test tijaabada heerkulka sare iyo hooseeya iyo wixii la mid ah.
baaritaanka daalka gariirka
Tijaabada heerkulka oo hooseeya
Tijaabada heerkulka sare
Wareegyada imtixaanka heerkulka sare iyo hooseeya
Cadaadis ku samee baaritaanka daalka
Astaamaha aasaasiga ah ee isku xidhka tuuboyinka Beijing Grip Pipe
Waxqabadka guud ee aadka u fiican: waxay ku habboon tahay tuubooyinka birta ah iyo tuubooyinka aan birta ahayn. Mana ubaahan wax gaar ah warbaahinta gudaha tuubada, dhumucda dhuumaha iyo wajiga dhamaadka.
Baaxad ballaaran oo codsi ah: ma aha oo kaliya inay saameyn wanaagsan ku yeelaneyso saameynta tuubbooyinka caadiga ah, laakiin sidoo kale waxay awood u leedahay inay si waadax ah u hayso culeyska saarista iyo dheecaanka-caddeynta dhuumaha oo ay ku jiraan barokac axial ah, leexasho xagal ah iyo dhexroor dibedda ah oo aan isku mid ahayn isla waqtigaas.
Hawlgal debecsan oo habboon: badeecaddu waa iftiin, cabbir kooban oo waxaa lagu rakibi karaa qalab fudud. Isla mar ahaantaana, qaab-dhismeedka caqliga leh iyo qaabeynta, way fududahay in lagu kala furro waqti gaaban. Ka sokow, waa dib loo isticmaali karo waana sahlan tahay in la ilaaliyo.
Tayo wax lagu kalsoonaan karo oo damaanad qaada nabadgelyada: u hibeynta nashqad dhismeedka iyo tayada qalabka dabka ka hortagga oo wanaagsan ayaa dammaanad qaadaya nabadgelyada markii lagu rakibo dabka xaaraanta ah ee ka hortagga qaraxyada.
Xirmooyinka tuubbada GRIP waxay ku siinayaan wax fudud oo rakibid, waqti badbaadin iyo lacag badbaadin xal. Xirmooyinka tuubbada 'GRIP' waxay u oggolaaneysaa tuubooyinka in la isku daro iyada oo aan loo baahnayn kala-bax, xoqitaan, dun ama alxamid. Adiga oo si fudud u jaraya laba tuubbo isla markaana isku xiraya isku xirka tuubada GRIP, booska, culeyska, waqtiga iyo keydinta kharashka waxaa lagu gaarayaa rakibaad kasta.
• La jaanqaadi kara nidaam kasta oo ku biirista dhaqameed
• Wuxuu ku biiraa tuubooyin isku mid ah ama waxyaabo la mid ah
• Dayactir deg deg ah oo fudud oo dhuumaha waxyeelloobay iyadoo aan adeegyo laga helin
• Isku-xidhka tuubbada oo aan kadeed lahayn
• Magdhaw dhaqdhaqaaqa foosha iyo leexashada xagal
• Cadaadis-u adkaysta iyo daadinta-caddayn xitaa la isku imaanshaha biibiile sax ahayn
3. Fududeyn wax qabad
• Fududeyn iyo dib loo isticmaali karo
• Dayactirka waa bilaash dhibna malaha
• Ma jiro iswaafajin waqti badan qaadata iyo shaqo ku habboon
• Tikniyoolajiyadda rakibidda fudud
• Saamaynta quudinta ee horumarka ah
• Saamaynta isdabajoogga
• Daxalka u adkaysta iyo heerkulka u adkaysta
• U adkaysi wanaagsan kiimikada
• Waqti adeeg dheer
5. Badbaadinta booska
• Naqshad isku dhafan oo loogu talagalay rakibidda booska lagu keydiyo tuubooyinka
• Miisaanka fudud
• Wuxuu ubaahan yahay boos yar
6. Si dhakhso leh oo badbaado leh
• Rakibid fudud, dab ama qarax halis ma leh inta lagu jiro rakibidda
• Wax kharash ah oo loogu talagalay tallaabooyinka ilaalinta
• Wuxuu nuugaa gariirka / oscillation